Imifino njalo zihlukaniswa ukusetshenziswa kwaso, fresh noma kuphekwe ngesikhathi ukwelashwa ezishisayo (ukupheka, ukuthosa, ukubhaka, njll). Ayikho ngaphandle futhi zucchini steamed, okuhlanganisa ingxube izithako ezahlukene nithela eziningi amavithamini. Ikakhulukazi isidlo esihlwabusayo etholakala ehlobo, lapho yonke imikhiqizo isitshalo athabiswa freshness yayo. Futhi ngesikhathi esifanayo ukukhanya isidlo enempilo ikuvumela ukuba ziyahlukahluka imenyu.
Ngakho, indlela ukulungiselela zucchini iyisitshulu nge imifino? Ngezinye 6 izingxenye udinga: 1 kg zucchini, izaqathe 300 g, 1 ikhanda onion, utamatisi 1, 40 uwoyela ml sunflower, umhlabathi emnyama nosawoti ukunambitha, amakhambi (parsley, dill). Isilinganiso ukupheka isikhathi isigamu sehora. Umsoco ingxenye ngayinye - mayelana 89 kcal.
Okokuqala, kudingeka alungiselele zonke izithako. Anyanisi bahlanza, uthathe izingcezu ezincane bese gazinga epanini in amafutha sunflower. Kukhona futhi ke engeza utamatisi, oqoshiwe zibe yizicucu amancane.
Kufanele ukulungiselela zucchini. Uma basebancane, abakwazi sihlanza kodwa uthathe cubes. Uma imifino overripe - ikhasi bese ususe imbewu, nquma zibe izicucu. Izaqathi kudingeka grate. Engeza imifino ibhalwe onion utamatisi. Usawoti kanye pepper - ukunambitha. Konke lokhu-ke embozwe ngesivalo futhi kungacimi kungakapheli imizuzu 20.
Uma imifino zithambile, banezela dill kanye parsley, zucchini ke wayeqhubeka on ukushisa low imizuzu emihlanu. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi isidlo usulungile, futhi zingaba kuphela yona etafuleni.
Umnkantsha iyisitshulu imifino kungenziwa bondliwa njengendlela dish ehlukile, futhi njengendlela Hlobisa. Ngokwesibonelo, ungakwazi Bilisa ayi evamile bese bekhonza okuphekwe nemifino izitsha. Ngokushesha futhi kalula, kanti okunomsoco pitelno.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le iresiphi akukhona ngempela njalo ilandelwe ncamashi: okucabangwayo wamukelekile at ukupheka. Kuyinto inqubo yokudala, futhi umkhaya ngamunye kuye ngamunye. Ukungeza kusukela ngokwayo noma ingxenye, it is Ngalokhu ulunika ukunambitheka. Ngokwesibonelo, ngo-zucchini amazambane iyisitshulu kungenziwa wanezela, kuphumele okunempilo ngaphezulu isidlo ematfuba igcwaliswe.
Nge ukwakheka efanayo izithako kungaba zucchini ubhake kuhovini. Ukuba ngibanike ukunambitheka ekhethekile elicwengiweyo kungenziwa wabeka phezu ushizi vukuza, noma mix it ne ayi esesikhulume ngazo. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka isidlo esihlwabusayo kakhulu futhi mnandi.
Ungakwazi ukulungiselela futhi iyisitshulu zucchini nge inyama. Lezi zingxenye ukuhlanganisa kahle nomunye, ukudala isidlo esihlwabusayo futhi unempilo. Izinketho wokulungiselela ukudla okunjalo kukhona abaningana: ungakwazi, isibonelo, zucchini kubhakwe kuhlanganiswe nanoma inyama, welula, ukupheka Burgers nokuningi. Njengoba imifino uzilungiselele ngokushesha okukhulu, ngokuvamile babekhetha hhayi inyama inyama nengulube. Uma zonke umucu efanayo esithathwayo, kubalulekile ukukhetha inyama yezilwane ezincane (inyama yenkonyana, inyama yengulube, iwundlu) noma inyoni. Okuhle uzobe kuhlanganiswe le ushizi dish, ukwakha phezulu omnandi okumnandi. Njengoba ubona, akukho eziyinkimbinkimbi lapha, kodwa yonke into ngiyithola esihlwabusayo yasekuqaleni.
Ngokukhethekile iphathwa ukuze bhisikidi. Kanjani futhi yini cwilisa ikhekhe
Indlela ukupheka duck: amathiphu abathandi yenkukhu
Pie okumnandi nge amazambane kanye ukugxusha kuthebula iholide
Umndeni okusanhlamvu - izitshalo kwamasiko, okwelapha, ifolishi lobuchwepheshe
Uhlangothi enhle yokusebenza kwabezindaba - hhayi nje Craze, kodwa futhi ukuqinisekisa umzimba ophilile
Dream Ukuhunyushwa: lokho ngiphuphe ingwenya
Jamaican uhlelo lwemali
Kokuhlukana Mutational nezinhlobo yokwanda koshintsho
Umklamo eziyinkimbinkimbi "Kyïv inqaba"
Isabelomali Regional - ngesisekelo zezimali iziphathimandla lesifunda